Ny Samsung Galaxy Tab A7 dia efa misy any Espana izao hamandrihana | Androidsis
Ny Samsung Galaxy Tab A7 dia azo alaina ao Espana ankehitriny
Tamin'ny volana aogositra lasa teo, nampiditra tamin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Tab S7 sy S7 +, ireo takelaka roa misy ny orinasa Koreana Mijoroa amin'ny iPad Pro mahery an'ny Apple. Na dia mihoatra noho ny fanitsiana ny vidiny aza ny vidiny omeny antsika, tsy natao ho an'ny paosy rehetra izany.
Ho an'ny teti-bola rehetra, Samsung dia manome antsika ny Galaxy Tab A7, ilay kinova vaovao amin'ny takelaka fidirana mankany amin'ny ekosistema Samsung izay misy any Espana ankehitriny ary izay ampahany amin'ny 229 euro amin'ny kinova mora indrindra ary ny efijery dia mahatratra 10.4 santimetatra.
Ny Galaxy Tab A7 vaovao dia misy amin'ny kinova roa: 4G + Wi-Fi sy Wi-Fi ary kinova fitehirizana roa: 32 sy 64 GBNa dia maodely roa aza dia afaka manitatra ny toerana fitahirizana hatramin'ny 1 TB amin'ny fampiasana karatra fitehirizana. Raha miresaka loko isika dia tsy maintsy miresaka safidy roa koa: Volondavenona sy Volafotsy, na dia mampiseho ny loko volamena aza ireo sary fampiroboroboana.
Ny takelaka dia nanjary fitaovana tsara indrindra handinihana (ny varotra nandritra ny areti-mifindra an'ity fitaovana ity dia naneho an'io) fa koa mba handany ny atiny multimedia na aiza na aiza misy antsika, ny Galaxy Tab A7 dia fitaovana mety indrindra noho ny Efijery 10,4-inch misy vahaolana WUXGA, mpandahateny efatra (roa amin'ny lafiny roa) ary mifanentana amin'ny Dolby Atmos.
Mahatratra 7.040 mAh ny bateria ary mifanaraka amin'ny famahanana haingana 15W. Ny processeur dia 8 cores ary miaraka amina RAM 3 GB. Raha miresaka momba ny fizarana sary isika dia tsy maintsy miresaka momba ny fakan-tsary any aoriana, fakantsary aoriana 8 MP raha mahatratra 5 MP kosa ny eo alohany.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Galaxy Tab A7
Samsung dia nanangana a fampiroboroboana mandritra ny famoahana ny Galaxy Tab A7, fampiroboroboana izay mahazo Powerbank isika ho fanomezana raha toa ka mitahiry ny maodelin'ity sokajy ity isika hatramin'ny 4 Oktobra ho avy.
Raha manana maodely Samsung taloha isika dia afaka mampiasa Samsung Renew hampihena ny vidiny farany amin'ny takelaka vaovao hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Samsung Galaxy Tab A7 dia azo alaina ao Espana ankehitriny
Google dia hanolotra ny Pixel 30 vaovao amin'ny 5 septambra